Xaalad khatar ah oo banii’adantinimo oo ka jirta Venezuala iyo madaxwaynaha oo diidan gargaar – Radio Daljir
Xaalad khatar ah oo banii’adantinimo oo ka jirta Venezuala iyo madaxwaynaha oo diidan gargaar
Febraayo 13, 2019 8:26 b 0
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaidó oo ka hadlay dibadbax balaaran oo kadhaca caasimadda Caracas ayaa sheegay inuu ilaalinayo gargaarka banii’aadantinimo inuu soo gaaro wadankaasi, kadib markii madaxwaynaha ay xilka isku haystaan ee Maduro uu sheegay inaan la keeni karin gargaarka banii’aadantinimo.
Mr Guaidó ayaa sheegay inuu jiro qadad badan ama wadooyin kooxaha gargaarka ay kusoo gaarsiin karaan dalkaasi taageerada banii’adantinimada.
Madaxwaynaha Venezuela Maduro ayaa goor sii horaysay ka sheegay warbaahinta BBC-da inaan la ogolaan doonin gargaarka oo uu ku tilmaamay in looga danleeyahay inuu Mareykanka kusoo farogeliyo wadanka Venezeuala.
Venezuela ayaa wajahaysa xaalad cunto yari, iyadoo dhaqaalaha xun meel xun gaaray.
“Waxaa jirta sadex boqol oo kun oo reer Venezuala ah oo qarka u saaran inay geeriyoodaan, haddii gargaara lasoo gaarsiin, waxaana xaalad caafimaad oo khatar ah ku sugan laba milyan oo qof” ayuu yiri Guaidó .
Madaxweynaha maraykanka oo ilhaan cumar ugu baaqay inay iscasiho